Yakanakisa honeymoon yekuenda kune yega zodiac chiratidzo muna 2019
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Yakanakisa honeymoon yekuenda kune yega zodiac chiratidzo muna 2019
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • France Kuputsa Nhau • Iceland Breaking News • Italy Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • Spain Kuputsa Nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Tsvaga akanakisa ehusiku ekuenda kunzvimbo yechiratidzo chako chezodhiac muna 2019 pano. Panofanirwa kuve pasina kunetsekana kuwana nzvimbo chaiyo kana iwe uchitungamirwa nenyeredzi.
Uine zvakawanda zvekufunga nezvazvo kana uchironga nguva yako yekuchata; chii nebhajeti, kugara kwenguva yakareba sei uye zvakawanda, kusarudza pane chaiyo nzvimbo kungave kunetsa. Zvakanaka funga kutarisa gwara redu pa Honeymoon yekuenda kune yega zodiac chiratidzo uye rega nyeredzi dzikutungamirire iwe kunzvimbo yakanaka yezororo rako. Chiratidzo chega chega chine maquirks uye hunhu, izvo zvinoita kuti dzimwe nzvimbo dzinakidze uye dzimwe dzisanyanya kudaro. Naizvozvo, panofanirwa kuve zano rakakura kurongedza kosi kuenda kunzvimbo dzinokodzera iwe. Wadii watora tarisa pane zvatinazvo uone kuti bhutsu inokwana here. Isu tinokupa iwe yakanakisa honeymoon yekuenda kune yega zodiac chiratidzo muna 2019.
Taurus (Kubvumbi 20 - Chivabvu 20) - Amalfi Coast, Itari
Taurus inoda zveumbozha uye inofara kwazvo kana ichinyura mukunakidzwa kwenyama senge chikafu chinonaka uye chinwiwa. Ichi ndicho chikonzero nzvimbo ino, makiromita makumi mashanu kubva kumahombekombe egungwa pamwe neSorrentine Peninsula yeItaly inogona kunge yakanakira chiratidzo cheVenus. Kudanana kwepamoyo, Taurus zvakare chiratidzo chepasi chine hukama nehunhu chinovatendera kunakidzwa nenzira dzinoyevedza uye maonero kubva kuguta rechiteshi cheSalerno neSorrento clifftop. Zvemukati zvekuburitsa uye kugara munzvimbo imwechete kwehurefu hwenguva kupesana nekukwakuka kweguta, Taurus inonakidzwa nenguva ino pakati peminda yemizambiringa, dzimba huru nemamonimu. Kune mamwe mafasheni ekuenda kuCapri neIschia uyezve kushanya kunzvimbo dzakaita sePompeii neMount Vesuvius kana kuona kereke inoshamisa iri muchivara.
Vashanyi kunzvimbo ino vanogona kusarudza kugara kuhotera Onda Verde iri chaiko pamahombekombe uye Cliffside inotungamira kuzasi kweAmalfi Coast. Imwe sarudzo ihotera Fontana iri pamvura uye munzvimbo huru. Nguva yakanakisa nekure kure yekushanyira ino-inosanganisirwa nyowani yekuenda iri muna Chivabvu kana tembiricha yakakwana pane vashoma vashanyi, uye mitengo iri pasi.
Gemini (Chivabvu 21 - Chikumi 20) - Barcelona, ​​Spain
Iine hunyanzvi hunyowani hunhu, Gemini yaizodanana neguta rino risingamborara kwavanogona kusangana kwakanyanyisa kwakasiyana panguva imwe chete. Hapana kana mumwe wekutsungirira mafambiro anofinha, mweya wehukama uye mweya unofarira hupenyu nehunhu muBarcelona, ​​nzvimbo ine huwandu hwesarudzo dzekunakidzwa. Vangave zvakare vanofara kushandisa zuva vachitarisira kubva kumusika wemugwagwa kuenda kupaki, uyezve musimamende kumahombekombe, uyezve nousiku kirabhu.
Dzimwe nzvimbo dzakanaka dzekugara dzinosanganisira iyo Hotel SB Diagonal Zero, iyo ine upscale yemakamuri emazuva ano, mwaka wepanoramic dziva, mabhati eTurkey neFinnish spa, uye kunyange solarium padenga rehotera. Kune zvakare Atenas Catalonia iyo inopa zvinoshamisa maonero kubva padenga rayo padenga rekushambira pakati pezvimwe zvinovava nyeredzi zvepamusoro. Nguva dzakanakisa dzekushanya ndedzokupera kwaKurume kusvika Kubvumbi uye kupera kwaGunyana kusvika Gumiguru kana mamiriro ekunze asina kunaka uye mhemberero dzakawanda.
Kenza (Chikumi 21 - Chikunguru 22) - Great Barrier Reef, Australia
Imba inodziya uye yakashushikana pamoyo, gomarara rinonyanya kungwarira uye risinganyanye kufarira kukwira kuenda kusingazivikanwe. Nekudaro, zano rekuti muchato munzvimbo yakasununguka nemvura rinogona kungovaburitsa muganda ravo kuti vafare uye vazorore.
Kanzera yaizonzwa iri pamba, ichibatana nechinhu chavo chemvura uye ichinakidzwa nekuwanda kwehupenyu hwemumvura kuGreat Barrier Reef padyo nemhenderekedzo yeQueensland kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAustralia. Kune zvakare zvakawanda zvezviitiko zvekuita mairi, senge; snorkeling, kukwira chikepe, scuba diving, helikopta kutenderera uye zvimwe mukati meakanyanya ecosystem kwemamaira akatenderedza.
Dzimwe nzvimbo dzakanaka dzekugara kwemuchato pano dzinosanganisira, Coral Cove Resort iyo yakatsanangurwa sekukosha kwakanyanya kwemari. A 30-maminetsi ekutyaira kubva kuBundaberg Airport, ino nzvimbo inopa yakanaka gungwa uye yegoridhe kosi maonero. Kune zvakare Rosslyn Bay Resort Yeppoon iyo inotarisisa yakavanda uye yakanaka Kemp Beach. Idzo dzimba dzekuzvichengetera dzakaringanawo kune vakaroorana vari kutsvaga zvekuvanzika. Yakakura kudhizaina gore rese, nguva yakanakisa yekushanya kunonoka Nyamavhuvhu kusvika kutanga kwaZvita. Nekudaro, kuoneka mugungwa rekoral kwakanyanya muna Chikumi naSeptember.
Leo (Nyamavhuvhu 23 - Nyamavhuvhu 22) - Serengeti, Tanzania
Anofara uye anobuda Leo haagone zvachose kufuratira. Zest yavo yehupenyu uye yakasarudzika yemagariro hunhu inokoshesa mukutarisisa kwavanogashira. Honeymoon yakakwana yaLeo ichave safari yeAfrica munzvimbo yakaita seTanzania kwavanobatana nedivi ravo remusango uye vanotora pikicha nezita ravo rehumambo uye regal zodiac. PaSerengeti National Park, vashanyi vanogona kunakidzwa nemabhichi ane jecha, kubhururuka mumabhaluni emhepo anopisa, kutarisa mafambiro emusango, kuenda kumasafari kunoona shumba, nzou, uye kunyange kukwira Gomo reKilimanjaro.
Dzimwe dzimba dzakanaka pano dzinosanganisira, Serengeti Wildebeest Camp muBanagi, uye yakasarudzika Nature Nyaruswiga Serengeti iri pakati peSerengeti. Nguva yakanakisa yekushanya kunonoka muna Chikumi kusvika Gumiguru apo mamiriro ekunze akanaka uye iwe unogona kuve neyakanakisa yekutarisa mhuka dzesango.
Virgo (Nyamavhuvhu 23 - Gunyana 22) - Machu Picchu, Peru
Kumanikidza uye hutano kuziva virgo nerudo rwekutsigira pasi raizoda uye kunakidzwa neiyo Sacred Valley yemaziso Picchu, Peru. Nemapaki akarongwa zvakanaka emugwagwa weInca pamwe nekuvakwa uye kurima kweguta rekare, zviri nyore kuona kuti nei virgo ingafarire kukwira uye kuongorora nzvimbo ino. Munhu anoda kuziva uye anonzwisisika, iye virgo angade kudzidza nezve uye nekuwana akawanda magadheni, makomo nemafuro munzvimbo ino inoshamisa.
Dzimwe nzvimbo dzinonakidza dzekugara pano ndeye Taypikala Machupicchu, iri mazana maviri emamita kubva kuMachu Picchu Chitima chechitima chine zvakanaka uye zvazvino zvigadzirwa. Kune zvakare Casa del Sol Machupicchu, iyo inopa yakanakisa sevhisi, maonero uye akapamhama makamuri, 250 km kure neAlejandro Velasco Astete International Airport. Iyo yakanakisa nguva yekushanyira Machu Picchu ndeye Kubvumbi kusvika Gumiguru kune yakanaka mamiriro ekunze uye kunyange anodakadza maonero.
Libra (Gunyana 23 - Gumiguru 22) - Paris, France
Inotongwa naVenus, iyo nyika yerunako nerudo, libra zvakare ine simba rakasimba rerunyararo munharaunda. Yakarerekera kuhungwaru zvakare, libra raizove nenguva yekuzvimba muParis Guta reMwenje. Guta rine vibe yetsika, mumhanzi uye hunyanzvi zvaizonyatso kurodza pfungwa dzeichi chiratidzo chechiratidziro. Zvakaoma kuwana zvirinani kukodzera kuenda kumuchato.
Kushanya kuLouvre, kudanana kunofamba uchitevedza mahombekombe eSeine anoyevedza kana iyo Pont des Arts kwaizoita miniti yega yezororo rako kungofadza.
Nzvimbo dzekudyidzana dzekugara dzinosanganisira yakashongedzwa zvine mbiri Villa Alessandra, iri munzvimbo yechivanze cheMediterranean uye padyo neArc de Triomphe. Kune zvakare Hôtel Plaza Étoile, ine dzimba dzayo dzemazuva ano munzvimbo imwechete iyoyo. Nguva dzakanakisa dzekushanya ndiApril kusvika Chikumi uye Gumiguru kusvika Mbudzi apo mapoka acho ari madiki uye mamiriro ekunze anonakidza.
Scorpio (Gumiguru 23 - Mbudzi 21) - Los Angeles, California
Kuve ivo vane chivimbo, vakashinga uye vanoda kuziva mweya zvavari, zviri nyore kuti scorpio ishore pane imwe nzvimbo. Uye nekuda kweichi chikonzero, imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuchata muUS nemakumi ezviuru zviitiko zvezviitiko uye zvinotaridzika, zvinokodzera ichi chiratidzo chinombo kufadza asi chakanakisa. Scorpios vanozivawo mashandisiro avo, saka pamwe nzvimbo isiri kure zvakanyanya uye zvakaenzana zvinodhura zvingave zvakakwana.
Ichi ndicho chikonzero Los Angeles California, inzvimbo ine zvese zvese kubva kumahombekombe kusvika kune echando makomo, mabani nemarenje, inzvimbo yakakwana kwazvo yehusiku kuenda kuchiratidzo ichi. Nenzvimbo dzakasiyana siyana uye nehunhu hwakanaka, miti yemichindwe, vakakurumbira uye bhurugwa reyoga, hazvigoneke kuti pasi rino riine chiratidzo chekuda kunyunyuta nekusuruvara.
Dzimba dzakanaka munzvimbo iyi dzinosanganisira, yakanyanya kukosheswa Hollywood Roosevelt Hotel, iyo inopa vashanyi zvakaputirwa en suite makamuri uye dzimba dzekugezera, pane saiti inopisa simbi yekushambira uye zvimwe zvinhu zvepamusoro. Kune zvakare iyo Sheraton Gateway Los Angeles ine makamuri emazuva ano nenzvimbo huru. Nguva dzakanakisa dzekushanyira LA ndiKurume kusvika Chivabvu uye pakati paGunyana naNovember.
Anonyanya kufarira zodiac, Sagittarius anokoshesa rusununguko rwavo pamusoro pezvose, uye angangodaro aine akati wandei matampu papasipoti yavo pari zvino. Sagittarius anogara achida kuziva uye anoda kudzidza uye kuongorora. Ichi chikonzero nei Iceland, imwe yenzvimbo dzakasarudzika dzemuchato, ingave yakanaka kune ichi chiratidzo chezodhiac. Nyika ine nzvimbo inoyevedza uye inokwezva yakakwana kune zviitiko zvekunze senge kukwira uye whale kutarisa, uye panguva yakakodzera, maonero ezviedza zveKumaodzanyemba. Iyi nzvimbo inopa Sagittarius mubatanidzwa wekugona kuzorora zvakakwana mushure memuchato uye rwendo, uye zvakare kuongorora uye kunakidzwa pavanosarudza kudaro.
Kwenguva huru kure, unogona kufunga nezvekugara kuStorm Hotel neKeahotels nemakamuri ayo epakati pakati peReykjavik. Kune zvakare iyo Hotera Gullfoss iyo inogona kuwanikwa neHvita River uye ingori 3 km kubva kuGullfoss Waterfall. Nguva dzakanakisa dzekushanya ndeye "Kukadzi, Kurume, Gunyana uye Gumiguru yekutarisa kumberi kwemwenje yeNorth magetsi.
Capricorn - Easter Island, iri pamhenderekedzo yeChile
Ichi chepasi chakavakirwa, chinoshanda nesimba chinotora nguva yekuzorora zvechokwadi kana vawana mukana wezororo. Uye saka nzvimbo iri kure yekuvharirwa ingangoshanda zvakanyanya kune yedu Capricorn. Ichi ndicho chikonzero Easter Island muChile, imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzekumahombekombe egungwa, inogona kungova nzvimbo yakakwana yekusunungura, kusunungura uye kudzorera zvakare. Kunyange ivo vachifarira nguva yavo vega, Capricorn zvakare ine simba risingadaviriki uye saka ingangove yakagadzirira kuongorora masendimita ese echitsuwa panguva yezororo Pane zvakawanda zvekuita paEaster Island; kubva pakufashura kana kuzorora pamahombekombe kusvika pakuzeya kana kutarisisa nyeredzi husiku. Vashanyi vanonakidzwawo nekushanyira nzvimbo yekuchera matongo yeRano Raraku uye nekuona matombo anozivikanwa nezvifananidzo zveAhu Tongariki.
Kune pekugara pazororo iwe unogona kufunga Iyo Taha Tai muHanga Roa. Ingori maminetsi mashanu-kutyaira kubva kuMataveri International Airport, ine mabungalows nedziva rekushambira rakakomberedzwa neminda yakanaka yakasvibira. Kune zvakare Hotel Hangaroa Eco Village & Spa iyo iri zvakare muHanga Roa uye inopa akanaka maonero egungwa pamwe nebasa rakanakisa. Nguva dzakanakisa dzekushanya ndiApril kusvika Chikumi kana Gumiguru kusvika Zvita kana mitengo iri pakati nepakati uye mamiriro ekunze akafanana.
Tsitsi uye dzinovimbika pisces dzinogona kunge dzinorota nezve yakanyanya kukwana uye yerudo nyowani yekuenda. Izvi hazvaizove kure nekusvika uye zviroto zvinogona kushanduka kuva chokwadi kana vakasarudza nzvimbo yakaita seHawaii kumabiko avo emuchato. Iyi ndiyo nzvimbo yakakwana kwazvo yePisces yekufungidzira. Nzvimbo yavanogona kugara kunze kwekufungidzira kwavo kwakajeka uye kurasika kwemaawa pamahombekombe erudo nekukwira nzvimbo kuti vaongorore mahombekombe akasvibira. Ivo zvakare vanogutsikana kuzorora mumakamuri avo uye vanonakidzwa nemaonero zuva rese, asi kune dzimwe nzira dzekuona nzvimbo dzinotyisa dzemakomo uye kutora maherikoputa mafambiro ekupinza kunyange zvirinani maonero.
Mushure memuchato unonetsa uye pamwe nechamupupuri, maPisces aigona kunakidzwa nekutandara nekuzorora muHawaii yakanaka. Dzimwe sarudzo dzenzvimbo dzekugara ndeyeKauai Beach Resort pane iri kumabvazuva kwemahombekombe eKauai ayo anopa vashanyi zvese kubva kune anopisa matabhu kusvika kumvura inonaya uye mimhanzi inorarama. Kune zvakare Royal Kona Resort inogara padivi pePacific Ocean paKailua Bay. Nemamiriro ekunze anofadza gore rese, hapana nguva yakaipa yekushanyira Hawaii; zvisinei, nguva dzakanakisa ndiApril, Chivabvu, Gunyana naGumiguru.
Kana iwe usina chokwadi chekuti ungonyorera kupi zororo rako, funga nezvekutevera nyeredzi kuti uwane dzimwe nzvimbo dzepamusoro dzemuchato, dzinoenderana nechiratidzo chako. Chiratidzo chako chezodhiac chakanakira kududzira hunhu hwako uye zvaunofarira. Ichi chikonzero nei iri kambasi inoshamisa yekutsvaga nzvimbo dzako dzakanakisisa dzehusiku kuenda kumahombekombe 2019. Kunyangwe iwe uri Sagittarius ane hunyanzvi kana Kenza yemumba, une chokwadi chekuwana chimwe chinhu chakanakira iwe.